Wararka Suuqa Kala Iibsiga: Barcelona Oo Diirada Saareysa Romelu Lukaku Iyo Qodobo Kale
HomeSuuqa kala iibsigaWararka Suuqa kala iibsiga: Barcelona oo diirada saareysa Romelu Lukaku iyo Qodobo kale
March 26, 2021 Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Wargeysyada 0
Xiddiga weyn ee reer Argentina Lionel Messi, oo 33 jir ah, ayaa qarka u saaran inuu qandaraas cusub u saxiixo Barcelona ka dib doorashadii madaxweynaha cusub Joan Laporta, ayuu yiri xiddigii hore ee Barca Rivaldo. (thesun)
Arsenal ayaan fursad u heysan inay heshiis joogta ah kula soo wareegto amaahda Real Madrid Martin Odegaard, oo 22 jir ah, iyadoo kooxda reer Spain ay weli u aragto ciyaaryahanka qadka dhexe ee reer Norway inuu qeyb muhiim ah ka yahay qorshayaashooda mustaqbalka fog. (Marca)
Xiddiga khadka dhexe ee Liverpool ee reer Holland Georginio Wijnaldum, oo 30 jir ah, ayaa u baahan doona inuu sugo inta ay Barcelona ka iibineyso ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Bosnia Miralem Pjanic, oo 30 jir ah ka hor inta uusan u dhaqaaqin Nou Camp. (Mirror)
Weeraryahanka Inter Milan iyo Belgium Romelu Lukaku oo 27 jir ah ayaa sidoo kale diirada u saaran tababaraha Barca Ronald Koeman. (Calcio Mercato)
Liverpool ayaa loo tixgeliyaa inay tahay kooxda ugu cadcad inay lasoo saxiixato weeraryahanka PSV Eindhoven Donyell Malen, inkastoo ay xiiseynayaan 22 jirkaan reer Holland oo ka socda kooxaha reer Talyaani ee Juventus iyo AC Milan. (Goal)
Tababare Ole Gunnar Solskjaer, oo 48 jir ah, ayaa qarka u saaran qandaraas cusub xitaa haddii Manchester United ay xilli ciyaareedka ku dhameysato iyadoon koob la qaadin. (Telegraph)
Milkiilaha Sheffield United Prince Abdullah ayaa sheegay inuusan dooneynin inuu ceyriyo Chris Wilder wuxuuna ku andacooday in tababarihii hore ee Blades uu weydiistay lacag dhan £ 4m si uu isku casilo. (Sky Sports)
Weeraryahanka reer Nigeria Kelechi Iheanacho oo 24 jir ah ayaa diyaar u ah inuu qandaraas cusub u saxiixo kooxda Leicester City xagaagan. (thsun)
Halyeeyga Roma Francesco Totti, oo 44 jir ah ayaa haatan ka shaqeyn kara wakiil isboorti ka dib markii uu dhameystiray diiwaangelintiisa Italy. (Gazzetta dello Sport)
Barcelona ayaa xiiseyneysa 25 jirka Eintracht Frankfurt ee reer Portugal Andre Silva. (Marca)
Tababare Zinedine Zidane mustaqbalkiisa Real Madrid ayaana weli cadeyn, iyadoo ay xiiseynayaan Xiriirka Kubadda Cagta Faransiiska. 48 jirkaan reer France ayaa qandaraaskiisu ku egyahay 2022. (AS)
Masar ayaa shaaca ka qaaday inay dooneyso Mohamed Salah inuu qeyb ka noqdo xulkiisa ugu dambeeya ee ciyaaraha Olimbikada xagaagan, taasoo la micno ah inuu seegi doono kulamada isku diyaarinta Liverpool . (Daily Mail)
Real Betis iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Argentina Guido Rodriguez, oo 26 jir ah, ayaa sheegay inuu ka warqabo xiisaha ay u qabaan Arsenal. (Standard)
Liverpool ayaa dib u soo cusbooneysiisay xiisihii ay u qabtay weeraryahanka reer France Nabil Fekir, kaasoo ku dhawaa inuu ku biiro Reds sannadka 2018. Si kastaba ha ahaatee, Inter Milan iyo Rennes ayaa sidoo kale xiiseynaya 27 jirkaan. (Estadio Deportivo)
Manchester United ayaa rajeyneysa in laacibka reer Portugal ee Bruno Fernandes uu gacan ka geysan karo soo jiidashada wiilka ay dhalashada wadaagaan ee Pedro Neto, oo 21 jir ah, isla markaana uu Old Trafford uga soo dhaqaaqo kooxda Wolves,(Footballinsider247)
West Ham iyo Crystal Palace ayaa labadoodaba xiiseynaya saxiixa 30 jirka qadka dhexe Aaron Ramsey, iyadoo Juventus ay dooneyso inay iska dirto xiddiga heerka caalami ee dalka Wales iyo ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer France Adrien Rabiot, oo 25 jir ah, kaasoo lala xiriirinayo kooxaha Manchester City iyo Barcelona. (Calcio Mercator)
Benfica ayaa iska fogeysay wararka sheegaya inay ku dhow yihiin saxiixa weeraryahanka reer Spain iyo ciyaaryahankii hore ee Chelsea Diego Costa oo 32 jir ah kaasoo koox la’aan ahaa tan iyo markii uu ka tagay Atletico Madrid bishii Janaayo. (Dailymail)
Ciyaaro.com kala Soco Wararka Suuqa Duhur Walbo qeybta tooska kala soco Halkan